Shabakada Alshahid | Archive | Wareysi
Muqdisho (Alshahid)- Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafi uu hogaaminooya ayaa booqasho ku jooga dalka Suudaan, isagoo halkaa kaga qeybgalaya sanadguuradii 57aad ee ka soo wareegatay xornimada dalka Suudaan. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa lagu wadaa in uu wadahadalo la yeesho madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir iyagoo ka wadahadli doona xiriirka labada dal [...]
Mogadishu (Alshahid)- Xafiiska ay Muqdisho ku leedahay Xarunta Cilmi Baarista iyo Daraasaadka Warbaahinta ee Alshahid ayaa maanta lagusoo gaba gabeeyay Tababar lagu baranayay Maamulka Mashaariicda Horumarinta. Tababarka oo maalintii Shalay la furay ayaa wuxuu ahaa mid loogu tala galay Laba maalmood, waxaana kasoo qayb galay ku dhawaad 20 ruux oo Gabdho iyo Wiilal isugu [...]
Dowlada Yamen oo codsatay in laga daad gureeyo dalkeeda Qaxootiga Soomaaliyeed
Sancaa (Alshahid)- – Dowladda dalka Yemen ayaa ka codsatay beesha caalamka in laga raro ilaa 700 oo kun Qaxooti Soomaaliyeed ah kuwaas oo kusugan dalkeeda mudo ka badan 21 sano. Dr. Cali Muthana Xasan oo ah Wasiir ku xigeenka Arimaha Dibada dowlada Yemen sidoo kalena ah gadoomiyaha gudiga qaxootiga Yemen ayaa waxa uu sheegay asagoo [...]
Gudoomiyaha ardayda jaamacadaha ee kasoo jeeda gobolka Waqooyi Bari, Kenya oo waraysi siiyay Alshahid.
Nairobi (Alshahid)- Ardayda kasoo jeeda gobolka Waqooyi Bari, Kenya oo ah arday Soomaaali ah ayaa waxaa ay dhawaanahan kusoo badanayeen jaamacadaha ku yaala dalka Kenya kuwaasi oo horay ay ugu yaraayeen tira ahaan. Hadaba ardeyda ayaa waxa ay leeyihiin urur ugaar ah oo lagu magacaabo; North Eastern Province University Students Association (NEPUSA) waxaana madax ka [...]
June 24, 20105 CommentsRead More
Prof. Dhalxa oo waraysi dhinacyo badan taabanaya siiyay Shabakada Alshahid.
(Alshahid)- Guddomiye kuxigeenka 1aad ee baarlamaanka KMG Prof. Maxamed Cumar Dhalxa ayaa sheegay in dowladda KMG ay qaadatay go’aano sharci daro ah oo ay kamid yihiin qaraaro muhiim ah oo ay dowladdu qaadatay iyadoonan la tashan baarlamaanka. Prof. Dhalxa ayaa dhinaca kala xaqiijiyay in uu kalfadhiga baarlamaanka furmi doono todobaadka soo socda gudihiisa isagoo ka [...]
Axmed-Shariif “Way naga go’an tahay horumarinta iyo nabadaynta Galmudug”
Muqdisho ( Alshahid) - Madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed –Shariif Cali Hilowle ayaa Muqdisho ku jooga booqasho shaqo, waxaan kula kulmay hotelka Bakin (Ex Kuraasyo Cad), ee Km4, magaalada Muqdisho. Waxay ahayd markii ugu horreysay ee aan la kulmo, haddii aaan isku dayo inaan sifeeeyo, waxaan oran lahaa, waa nin dherer iyo gaabni u dhexeeya, maariin [...]
November 10, 20093 CommentsRead More
Wasiirka Warfaafinta “Waan taageersnahay eraygii safiirka Mareykanaka, dhinaca kale Alqaacidda ma aha feker ee waa cudur” (Wareysi dheer).
Nairobi (Alshahid) - Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda KMG Mudane Daahir Maxamuud Geelle ayaa sheegay in wax qarsoon aysan ahayn wadallada u socda dowladda iyo kooxaha mucaaradka, gaar ahaan Xisbul Islaam oo uu sheegay in ay u aqoonsan yihiin urur Soomaali mucaarad ah, wuxuuna meesha ka saaray inay Alshabaab sidaas oo kale u aqoonsadaan, isagoo taa cillad [...]
September 29, 20092 CommentsRead More
Wareysi xiiso leh oo aan la yeelanay Cabdi Nuur X. Maxamed oo dhowaan loo doortay inuu noqdo safiir la dagaala guddniinka hablaha.
Nairobi (Alshahid) - Cabdi Nuur Xaaji Maxamed ayaa dhowaan waxaa loo doortay inuu noqdo cod xooggan oo ka soo hor jeesta gudniinka Fircooniga ah “Strong Voice” against Female Genital Mutilation FGM. Cabdi Nuur oo aan qadka isgaarsiinta ku wareysannay isagoo jooga dalka Sweden ayaan marka hore weydiinay waxa loola jeedo ‘Codka Xooggan’ wuxuuna ku jawaabay “Waa [...]
September 15, 20091 CommentRead More
Dhageyso Cabashada Soomaalida Tahriibka ku Jooga Sudan
Waa wareysi gaar ah oo lala yeeshay qaar ka mid ah qaxootida soomaalida ee jooga Suudaan. Qaxootidan waxay iskula jiraan rag iyo dumar, badankoodana waxay rajo ka qabaan inay u baqoolaan dhinaca Libya oo mar dhow aan ku daabacnay halka Alshahid magacyada qaar ka mid ah soomaalida ku rafaadsan Libya. Dhibaatada Soomaalida Suudaan joogta waa [...]
August 6, 20094 CommentsRead More
Prof. Dhalxa oo ka hadlay xil ka qaadistii uu sameeyay Baaarlamaanka
Nairobi (Alshahid) Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Baarlamaanka Mudane Maxmed Cumar Dhalxa ayaa maanta wareysi uu siiyay Alshaahid.net kaga halday kulankii ay shalay Baarlamanku ku yeesheen Muqdisho oo ay xilka kaga qaadeen shan ka mida xildhibaannada. Guddoomiye ku xigeenku wuxuu sheegay in ragga xilka laga qaaday ay yihiin saaxiibadiis ay soo wada shaqeeyeen, isla markaana [...]